(पहिलोपोस्टमा 4th July 2015 | १९ असार २०७२ मा प्रकाशित | http://www.pahilopost.com/content/-5478.html)
पेशाले म क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। भन्दा जति नमिठो भए पनि र नमिठो सुनिए पनि मैले धेरै पटक ‘हजुर कस्तो मृत्यु चाहनुहुन्छ?
अस्पतालमा कि घरमा?’ भनेर सोधेको छु बिरामीको परिवारलाई। विदेशमा धेरैतिर बिरामीसँगै यस्ता कुरा सोधिन्छन्। तर हाम्रोमा यो अभ्यास अझै सुरु भएको छैन, अथवा हामी अझै पनि हच्किन्छौं त्यसरी सोध्न। अनि बिरामीका परिवारसँग सल्लाह गर्छौँ।
यो पढ्दै हुनुहुन्छ भने एकछिन साँच्चै रोकिएर सोच्नुस् त, तपाइँको अन्तिम स्वास कसरी र कता जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ?
मेरा एक जना बिरामी हुनुहुन्थ्यो- आफ्नो उमेरमा निकै सफल व्यवसायी। तर वहाँलाई गाह्रो रोग लाग्यो। बेलैमा उपचार पाउनु भयो र केही समय निको पनि भयो। तर व्यथाले फेरी च्याप्यो। केही समय फेरि हामीले जित्यौँ वहाँको रोगलाई। तर एउटा समय आयो, हामीले आत्मसमर्पण गर्नै पर्ने देखियो - जति मेहनत, पैसा खर्च गरे पनि रोग डेग चलेन। अनेकन प्रयासका बाबजुद पनि मृत्यु पछाडि सर्दै सरेन।
मैले वहाँहरूलाई सोधेँ, ‘अब केही महिना होलान्- कता बिताउन चाहनुहुन्छ? अस्पतालमा कि घरमा?’ वहाँले र परिवारले घर छान्नुभयो।
उहाँको घरमै आराम गर्ने व्यवस्था गरिय- केही सर-सामान, परिवारका केही सदस्यहरुको दैनिकीमा केही परिवर्तन गर्न भनियो। र, नजिकै बस्ने एकजना नर्सको व्यवस्था गरियो, जसले सघाउनुहुन्थ्यो। यता म त छँदै थिएँ फोनमा भेटिने। हामीले वहाँको मृत्युसँग त जित्न सकेनौँ - तर जुन बेला वहाँले आफ्नो अन्तिम स्वास लिनुभयो, वहाँ आफ्नो घरमा, आफ्नो खाटमा, आफ्ना परिवार माझमा हुनुहुन्थ्यो। पीडा त दुवैलाई भयो होला- वहाँलाई पनि र परिवारलाई पनि। जति नै रोगी भए पनि, जति नै कष्ट खेपेपनि आफन्त गुमाउन कसलाई मन लाग्छ र ! तर पनि मृत्यु सास्वत सत्य हो - यसलाई सधैँ सबैले जित्नै सक्दैनन्।
‘सास हुञ्जेल आस हुन्छ’ भन्छन् - गलत पनि हैन सायद। कहिले र कसरी भन्ने कुरा फरक होलान्। मैले यसो भन्दै गर्दा कति जनाले ‘डाक्टर भएर पनि यस्तो भन्ने?’ भन्छन्। तर त्यसो भनिरहँदा एउटा कुरा सबैले बिर्सिन्छन्- कि डाक्टर पनि मान्छे हुन्। सामान्य मान्छे जसले डाक्टरी पढे र सिके। यिनीहरु सामान्य मान्छेभन्दा यसमानेमा मात्र फरक छन् कि यिनीहरुले रोग चिन्छन् र त्यसको उपचार गर्छन्। तर सत्य के पनि हो भने यिनीहरुले मान्छेलाई अमर बनाउन सक्दैनन्। असाध्य रोग हो भने केही समय मृत्युलाई टार्लान्, बस् त्यत्ति हो।
चिकित्सा विज्ञानले धेरै फड्को मारेको छ - तर अझै पनि धेरै अवस्थाहरू यस्ता हुन्छन् जहाँ विज्ञानले घुँडा टेक्नै पर्ने हुन्छ। अन्तिम अवस्थाको क्यान्सर पनि यस्तै अवस्था हो। जहाँ डाक्टरले धेरै केही गर्न सक्दैनन्, मृत्युलाई सहज बनाउने बाहेक।
‘हैन, बिरामीलाई सबै भन्नुपर्छ। मर्नु अघि पुरा गर्न मन लागेका ईच्छाहरू होलान्। तिनीहरुलाई पुरा गर्ने समय दिनुपर्छ,’ मेरा गुरु यसबारे प्रष्ट हुनुहुन्छ। म अझै पनि हच्किन्छु, अड्किन्छु र रोकिन्छु। कुनै बिरामीलाई ‘हजुरसँग केही समय मात्र बाँकी छ, कसरी बिताउनुहुन्छ?’ भनेर सोध्न दह्रो मुटु चाहिन्छ। यो सजिलो काम होइन। एउटा डाक्टरले बिरामीलाई ‘तेरा दिन सकिए’ भनेपछिको बिरामीको मनोदशा सोचौं न। कसरी स्वीकार गर्ला बिरामीले मृत्युको सत्यलाई? त्यसैले सहजताका लागि पनि परिवारसँग कुरा गरिन्छ। परिवारले पनि ‘होस्, अब हार मानौँ’ कसरी भन्न सक्छ होला र ! त्यसैले धेरै बिरामीहरू आफ्नो अन्तिम स्वास अस्पतालको शैय्यामा, तारमा जेलिएर, नशामा छिरेका पाइपहरू माझ एक्लो टीठलाग्दो मृत्युवरण गर्छन्।
मेरा एक जना बिरामी त्यसरी नै मृत्युको नजिक हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो घरभन्दा सयौँ किलोमिटर टाढा। काठमाडौंमा जम्मा भएका उहाँका आफ्न्तहरूले के गर्ने भन्ने निर्णय नै गर्न सक्नुभएन। वहाँ क्यान्सर वार्डको बेडमा, आफन्तहरू घरि भित्र घरि बाहिर गरिरहनुभएको थियो।
बिरामीका आँखा चाहिँ खै कसलाई हो खोजिरहेका थिए। आँखा आँसुले भरिएका थिए तर नपोखिएका। वहाँको छेउमा कोही बसेको थिएन - कोही फोनमा व्यस्त, कोही कता। लाग्थ्यो- उनीहरु मलामी भेला पार्न खोजिरहेका छन्। यता मृत्यु शैय्यामा पल्टिरहेका बिरामीकी श्रीमतीलाई यो अवस्थाका बारे भन्ने कि नभन्ने भन्ने खासखुस चलिरहेको थियो।
मैले बिरामीको सिरानमा रहेको मोनिटरमा धर्साहरू हेरेँ - ती अर्थहीन थिए। मैले सबै तारहरू छुटाइदिएँ। त्यो बेला वहाँको ब्लड प्रेसर कति छ वा धड्कनको रफ्तार कति छ - केही मतलब राख्दैनथ्यो। किनकी त्यो ब्लड प्रेसरले, त्यो धडकनले वहाँमा जीवन भर्न सक्दैनथे। थाहा छैन, म एउटा डाक्टर भएर त्यसो गर्नु हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो। तर मैले नजिकै अन्तिम सत्य देखेँ। र, सबै तारहरु छुटाइदिएँ।
म त्यहीँ छेउको कुर्सीमा बसेँ र बिरामीको हात समातेँ। वहाँले मलाई हेर्नु भएन। अनुहारमा केही भाव पनि आएनन्। सायद वहाँलाई पीडा भइरहेको थियो। वहाँको मन छटपटी पनि थियो कि कुन्नि ! बिना भाव नै वहाँले मेरो हात जोडले समात्नुभयो- मानौँ वहाँले कसैको हात खोजिरहनुभएको थियो, अन्तिम साहस र अन्तिम बिदाइको लागि।
म त्यहीँ बसिरहेँ। त्यहीँ बसेर सबै भन्दै गएँ नर्सहरूलाई - स्लाइनहरू बन्द गरिदिनुस्, बेडको वरिपरि पर्दा लगाइदिनुस्, बत्ती मधुरो बनाइदिनुस्। म चाहन्थें वहाँको अन्तिम स्वास शान्तिसँग जाओस्। वहाँको मनमा अनेकन छटपटी होलान्, पीडा होलान्, जीवनभरी व्यक्त गर्न नसकेका कति व्यथाहरु पनि थिए होलान्। तर त्योबेला म वहाँका कुनै कुरा पुरा गर्न सक्दिनथेँ। मैले गर्न सक्ने भनेको वहाँको दुखाइ निवारण मात्र थियो, त्यो पनि वहाँको रोग निको पारेर पुन: बल्झिने गरी होइन, कहिल्यै नबल्झिने गरी।
वहाँको हात मेरो हातमै थियो। कस्सेर च्याप्प समातेको हात- मानौं म भागेर कतै जाँदैछु र वहाँ मलाई रोकिरहनुभएको छ। म वहाँको अनुहारमा हेरिरहेको थिएँ एकटक। धड्कन चलिरहेको थियो। केहीबेरमै मेरो हत्केलामा रहेको वहाँको हत्केला सेलाएजस्तो भयो। मैले वहाँको अनुहारमा हेरेँ, भाव शून्य। वहाँको स्वास रोकियो- मैले हात थामिरहँदा नै वहाँको स्वास रोकियो। जसले जीवन दिन्छ भनेर वहाँ आउनुभएको थियो त्यसकै हातमा हात राखेर वहाँको जीवन सकियो।
म त्यो मृत हातबाट मेरो हात फुस्काएर उठेँ। त्यसपछि वहाँको परिवार आयो। सबैकुरा भए। तर मलाई यसपछि एककिसिमको छटपटि भइरह्यो धेरै दिनसम्म। म एक चिकित्सक, त्योपनि डरलाग्दो ठानिएको क्यान्सरको। मेरा लागि मृत्यु सहज हुनुपर्ने हो। धेरैलाई लाग्छ पनि, मृत्यु देखेर डाक्टर आत्तिदैनन्। हुनुपर्ने पनि त्यस्तै हो, किनकी डाक्टरसँग कुनै सञ्जिवनी बुटी हुँदैन जसलाई खुवाएर बिरामीलाई उठाउन सकियोस् र अमर बनाइयोस्। तर म आत्तिन्छु, मलाई छटपटी हुन्छ यस्ता घटनाहरु देख्दा।
आखिर जीवन के हो ? मृत्यु के हो त? बाँच्न पाउनु अधिकार हो भने सहज मर्न पाउनु अधिकार हो कि होइन? यी प्रश्नहरुले मलाई धेरै दिनसम्म सताइ रहे- यस्ता अनेकन सवालहरु मेरो मनमा आइरहे।
हामी, हरेक मान्छे, ‘यसरी बाँच्ने’ भनेर योजना बनाउँछौँ- घर बनाउने, सन्तान जन्माउने, गाडी किन्ने अनि धेरै धेरै योजनाहरु। तर हामी कसैले पनि मृत्युको बारेमा योजना बनाउँदैनौं। हो, मृत्यु आफूले चाहेर प्राप्त गर्ने कुरा पनि होइन। जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि सायद मान्छेले मृत्युलाई देख्दैन। त्यसैले यसको लागि योजना बनाउनु निरर्थक ठानिएला।
जीवन यसरी बाँच्छु भनेर योजना बनाउन सजिलो छ तर म यसरी मर्छु भनेर योजना बनाउन गाह्रो छ। तर पनि मलाई ‘म यसरी मर्ने’ भनेर योजना बनाउन मन लाग्यो। मैले चाहेको मृत्युवरण गर्न पाउँला, नपाउँला। मलाई थाहा छ, मृत्यु मेरो बसमा छैन। तर पनि म चाहन्छु- मेरो अन्तिम स्वास मेरो घरमा जाओस्। मेरो परिवारको वरिपरि, मेरी श्रीमतीको हात समातेर, पीडारहित। शरिरबाट मेरो सन्तुष्ट मन बिस्तारै निस्कियोस् र विलीन होस्।
मैले आफ्नो मृत्युको कल्पना गरिरहँदा अरुले पनि आफ्नो मृत्युको कल्पना गरुन् जस्तो लाग्छ मलाई। आफू एउटा अस्पतालको डाक्टर भएर यस्तो भन्न वा लेख्न मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन। तर अस्पतालको शैय्यामा स्लाइन र अक्सिजनका पाइपमा जेलिएर अन्तिम संघर्ष गरिरहेका बिरामी, परिवार र आफन्तले पनि आफूले, आफ्नो परिवारको सदस्यले कस्तो मृत्यु चाहोस् भन्ने चाहानुहुन्छ सोच्नुपर्छ होला सायद अब। जीवनभरी सुखको कल्पनामा संघर्ष गरेको एउटा जीवनको अन्त्य पनि सुखद होस् भनेर सोच्नु पक्कै गलत होइन।
Yeah, I would like to die in the bank of white river besides jungle....with nature...and want to be decayed rather than cremated
Here are the commonly used mantras 'chantings' used in Janai Purnima / Rakshya Bandhan. New holy thread 'janai' is worn by Hindu males on the occassion of Janai Purnima. Here is the mantra chanted while janai is worn. जनैपूर्णिमामा नयाँ जनै धारण गर्ने मन्त्र: यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्‌सहजं पुरस्तात् । आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्चशुभ्रं यज्ञोपवीतं वलमस्तुतेज:।।